> Resource> Android> Zipụ na Anata Android ozi ederede site na Computer Mfe
Ederede ozi, a makwaara dị ka SMS, bụ obere mkparịta ụka ikori n'etiti ndị mụrụ gị, ndị enyi, ndị ọrụ ibe na unu. Ha idekọ obere na-abaghị uru na ndụ kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere otu Android ekwentị na ederede a otutu, ị pụrụ iche a obere annoyed. Ọ bụ n'ezie kemmekpa ka ederede a ozi, karịsịa na a obere Android ihuenyo. Ka njọ, texting na android ekwentị amama na-adị nnọọ ngwa ngwa.
Enwe ọtụtụ ihe banyere na ide ozi n'ekwe ntị? Ọfọn, ị n'ezie na-adịghị na anabataghị na. Kama nke ahụ, ị nwere ike izipu na ozi ederede site na kọmputa na keyboard. Ugbu a, Wondershare MobileGo for Android ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)-ahapụ gị ime nke ahụ. Nke a vasatail Android njikwa na-enye gị ikike iji zipu a ederede ka mmadụ ma ọ bụ ọtụtụ mfe. Ke adianade do, mgbe ị na-onye na-achọghị ekwentị oku, nke a Android njikwa ga-ekwe ka ị ma n'aka ya anya ma ọ bụ n'aka ya anya ma zaghachi ya a ozi ederede. Ọ bụ jụụ? Ndị na-esonụ akụkụ na-aga-egosi na ị nzọụkwụ-site-nzọụkwụ-nduzi. Lelee ya.
The nzọụkwụ na screenshots na-e Mgbe ị jiri Windows version. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac version, ị ka nwere ike na-yiri iji gosi otú iziga na-enweta odide na kọmputa.
Nke mbụ niile, wụnye na-agba ọsọ ahụ Wondershare MobileGo for Android na kọmputa. Ikwunye na Apple eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa, ma ọ bụ i nwere ike ịgbalị WiFi njikọ. Ozugbo ahụrụ, gị Android ekwentị na ya data ga-emere ke akpan window nke Android faili.
Iji mee ka WiFi njikọ, ị ga-n'aka na ị arụnyere MobileGo ngwa gị Android ekwentị. Bụrụ na ọ bụghị, biko ibudata ma wụnye MobilGo ngwa ebe a.
Nzọụkwụ 2. Send na-enweta akụkụ site na kọmputa
The Android njikwa nwere igosipụta gị Android ekwentị data na-ekpe kọlụm. Gaa SMS na ị ga-ahụ niile eri nke ozi-egosi na nri panel. Pịa New na a dialog-abịa si. Dezie ọdịnaya nke ozi. Mgbe ahụ, pịa a-acha anụnụ anụnụ cross on nri nke dialog.
Ọzọ dialog Pop elu, na nke kọntaktị niile na gị Android ekwentị na-depụtara. Ego igbe tupu kọntaktị ị na-aga ka izipu ozi. Na, na, pịa OK.
Mgbe ozi dị njikere, pịa Zipụ. The ozi ga-zigara ka mmadụ na ị chọrọ inweta. Mgbe mmadụ na-enye gị a nzaghachi, Android njikwa ga-echetara gị na a dialog na ala nri akuku nke kọmputa na ihuenyo. Pịa dialog, na ị nwere ike idezi ọhụrụ ozi na-eme ka a zaghachi.
Gịnị banyere ekwentị gbanyere mkpọrọgwụ n'obi mgbe iji Android Manager? N'otu aka ahụ, a dialog na-egosi, na-enye gị abụọ nhọrọ. Otu bụ Decline. Zaghachi na Ozi. Nke ọzọ bụ Decline. Ime nhọrọ dị ka gị onwe gị na ọnọdụ.
Ọ bụ otú ahụ otú iziga na-enweta ozi ederede site na kọmputa. Mfe ma adaba, ọ bụghị ya? Ntak ibudata na-agbalị Android faili na gị onwe gị na?
Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Outlook